Temberi yemagamba, mufananidzo weHondo Huru iyo Rif Hondo | Zvazvino Zvinyorwa
Chufo Llórens (1931-) akawana chinzvimbo chake semumwe wevamiriri vakakurumbira venhoroondo yenhoroondo yeSpanish nekodzero yake. Hazvishamisi kuti mabhuku ake akarumbidzwa nekurongeka kwemaitiro avo uye data rakapihwa. Njodzi yemagamba (2020), hazvisi izvo; zvakare, munyori wechiCatalan aratidza kuzadzikiswa kwenyanzvi zvinyorwa.
Iyo epic yemhuri saga inoitika pakati peParis bhehemia mamiriro uye Madrid yechinyakare yemakumi emakore ekutanga e Zana ramakore rechi20. Iyo yaive nguva yakaratidzirwa nehondo mbiri dzehondo: Hondo Huru muEurope neRif War pakati peSpanish neMoroccans. Pamusoro peizvi, zvirongwa zvekufungirana, kuita, rudo, godo uye prevarication zvinosangana mune zvinyorwa.
1 Kuongorora uye Pfupiso yeiyo Fate yeMagamba
1.1 Zvimwe zvezviitiko zvakarapwa munoverengeka
1.3 Nzvimbo nenzvimbo yezvakaitika
1.4 Chimiro uye zvinhu zvezvakanyorwa mungano muZvakatemerwa Magamba
3.1 Makuriro ebasa rake
4 Hunhu hwenhoroondo dzenhoroondo dzaChufo Llórens
4.1 Zvinokurudzira, zvinokurudzira uye zviitiko
4.2 Hondo senge inopindirana axis
Kuongorora uye Pfupiso ye Njodzi yemagamba
Zvimwe zvezviitiko zvakarapwa munoverengeka
Iyo Rif Hondo pakati peSpain neMorocco
Kuuya kwenzira dzekutanga njanji muSpain
Nhare dzekutanga dzakabuda munharaunda yeIberia.
Kugadzirwa kwechikepe chepasi pegungwa.
Ivo protagonists ndiJosé Cervera, anerocrocrat anobva kuMadrid naLucie Lacroze, mwanasikana wemukadzi wechiFrench.. Pakutanga, José anodanana naNachita, mwanasikana ari mumwe wemuIndia uyo akapfuura nemuguta guru reSpain. Kune rake divi, Lucie anotora Gerhard, mudiki weGerman pendi uyo anoshuvira kuve mudzidzisi.
Zvisinei, fungidziro yenzanga uye zvimwe zvakasarudzika zvinonetsa input kupona kweshungu mbiri. Gare gare, musangano pakati paJosé naLucie unopera mumubatanidzwa. Nekudaro, iyo nyaya inotarisa panzira yevana vatatu vevaviri: Félix Pablo naNicolás.
Mugumo wemagamba ...
Nzvimbo nenzvimbo yezvakaitika
Iyo inoverengeka inotanga muna 1894, inguva umo kubwinya uye chinamato cheSpanish bourgeoisie ivo vaisiyanisa nehurombo nehutsinye hwemakirasi akanyanya kutambura. Uku kusaenzana kwaive hutachiona hwekupokana kwemagariro uye mhirizhonga.
Gare gare, hupenyu hwezuva nezuva hwenhengo dzenyaya hunoshanduka zvakanyanya nekuda kweHondo Yenyika Yekutanga uye Hondo yeRif. Sezvo rangano rinobuda, vanoverengeka vevatambi vanopfuura nemasaiti kusviba dzakasiyana seSahara Desert, Melilla, Lisbon, Paris neCaracas. Iyo ngano inoguma pakati-1920s.
Maitiro uye zvinhu zve nhoroondo yekunyepedzera mu Njodzi yemagamba
Nzvimbo dzakasiyana dzinosimbisa kuronga kwakamonyoroka uye shanduko yekumhanya. Zvakare, mazhinji e Mabhuku ekutsoropodza masosi anoratidza kuti zvinyorwa zvinyorwa zvebhuku rino zvakakodzera kudzidza. Kutanga kubva pane idzi nheyo dzakasimba, Llórens akaruka ngano inokwanisa kunyatsobatanidza zvikamu zverudo nezvikamu zvizere zvechiitiko, chipenga uye kusagadzikana.
Pamusoro pezvo, iwo akadhirowewa emuchadenga ekupenda anonyatso zadzikiswa neyakavimbika nhaurirano, aine mazwi akafanana enguva yacho. Saka, zvinopfuura ngano yekufungidzira, bhuku racho rinoita kunge nhoroondo inotaurwa neakaona. Nenzira iyi, munyori wechiCatalan anokwanisa kuita kuti vaverengi vafungire mukati memapeji anodarika mazana masere nemakumi mashanu anofukidzwa nerondedzero.
Pane edhisheni mawebhusaiti uye pamasaiti akatsaurirwa mabhuku, Njodzi yemagamba ine avhareji mamaki e8 / 10. PaAmazon, iyo yakakwira-nyeredzi-nyeredzi yakapihwa ne5% yevashandisi veInternet; chete 7% yakapa isingasviki 3 nyeredzi. Uye zvakare, vateveri vaChufo Llórens vanonongedzera kuzita iri sebasa rake rakazara kwazvo kusvika parinhasi.
Chufo Llórens akaberekerwa muBarcelona muna 1931. Asati azvitsaurira kunyora, akadzidza Mutemo, kunyangwe hwakawanda hwebasa rake rehunyanzvi hwakanga hwakazvipira mukusimudzira nekugadzira mashoo. Mushure mekurega basa, muna 1986 akatanga Hapana chinoitika pahusiku, chinyorwa chayo chekutanga, Kubva ipapo ane hunyanzvi mumhando ye nhoroondo yenhau.
Muna 2008, Llórens yakaburitswa Ndichakupa nyika, bhuku raakatsaurira kwaari angangoita makore mashanu ebasa pakati pekutsvaga nekunyora. Iri zita remusoro rakava shanduko mune rake rekunyora basa nekuda kwake Makumi zana nemakumi mashanu emakopi vinotengeswa mukati megore rekutanga rekuburitswa. Rondedzero yemabasa ake inopedzwa nemabhuku anoratidzwa pazasi:
Mumwe maperembudzi (1993)
Catalina, mupoteri kubva kunaSaint Benedict (2001)
Saga revakatukwa (2003)
Gungwa remoto (2011)
Mutemo weakarurama (2015)
Njodzi yemagamba (2020).
Makuriro ebasa rake
Kusvika iye zvino, Mabhuku aChufo Llórens anodarika miriyoni imwe emakopi akatengeswa, rakashandurwa mumitauro inodarika gumi nemaviri. Mitauro iyi inosanganisira: ChiGerman, Czech, Danish, Finnish, Italian, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Serbian, and Swedish. Neichi chikonzero, mukurumbira wake wekunyora wakadarika miganhu yeSpain; inozivikanwa muEurope yose.
Hunhu hwenhoroondo dzenhoroondo dzaChufo Llórens
Zvinokurudzira, zvinokurudzira uye zviitiko
Muhurukuro ne Nyika (2008), Llórens akataura kuti kuwedzera kwechimiro "kwakamuka nekuti musika wakakumbira. Kugovera uye kudiwa ndiko kukuru mutongi wezvinofarira uye zvisingafarire, panguva ino chishuwo chekuziva zvinhu kubva kune zvakapfuura zvinokwezva vaverengi uye kwandiri nhoroondo yenhoroondo inzira yekuwedzera budiriro kubudirira senge biographies kana mimwe misoro yemabhuku " .
Saizvozvo, munyori wechiCatalan akanongedzera kuna Alejandro Núñez Alonso semumwe wevanyori vane mukurumbira pabasa rakekana. Mazhinji emabasa ake akaiswa muguta reBarcelona, ​​asi zano racho kazhinji hariganhurwe kune rimwe guta. Muchokwadi, dzakawanda dzenyaya dzaLlórens dzinobata matunhu akasiyana eEurope uye, pakupedzisira, dzinovharira kune mamwe makondinendi.
Hondo senge inopindirana axis
Mhirizhonga yemagariro uye kukakavadzana kwehondo ndidzo mbiri dzinowanzoitika mumabhuku aChufo Llórens. Munzvimbo ino yekukonana, mavara akadzika zvakanyanya anokura, ndeyechokwadi, munhu, anotungamirirwa nezvinangwa zvavo uye nekunetsana kwemukati. Ehe - hazvigone kuve neimwe nzira mubhuku nemunyori weBarcelona - zvese zvakanyorwa zvakanaka uye zvakanyatsotsanangurwa.
Nguva dzepakati nepakati muBarcelona dzaigara dzichikurudzira Llórens muzvinyorwa zvake zvekutanga. Yakadaro nyaya ye Catalina, mupoteri kubva kunaSaint Benedict, Mumwe maperembudzi y Saga revakatukwa. Ipapo mukati Mutemo weakarurama y Njodzi yemagamba Munyori wechiCatalan akatarisa pane neuralgic zviitiko - zvakare muBarcelona - yekupedzisira XNUMX uye kutanga kwezana ramakumi maviri, zvichiteerana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Njodzi yemagamba
Kusarudzwa kwemashoko ekugadzirisa aJune